Xog: waxaa jira warar sheegaya in DFS looga adkaan karo Doorashada Galmudug - Awdinle Online
Xog: waxaa jira warar sheegaya in DFS looga adkaan karo Doorashada Galmudug
January 16, 2020 (Awdinle Online) –Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka soconaya loolan xoogan oo siyaasadeed, kaasoo looga soo horjeedo Dowladda Federaalka Somaliya, oo iyadu wadato musharax ay la dooneyso inuu ku soo baxo Doorashada Xafiiska Madaxtooyada Galmudug.
Villa Somalia ayaa toddobadyadii la soo dhaafay muujisay xusulduubka ay ugu jirto inay kaalin muuqato ku yeelato maamulka cusub ee lagu wado in loo yegleelo bulshada reer Galmudug, xilli eedeymaha loo jeedinayo ee ku aadan fara-gelinta qaawan ay maamulkan ku hayso, ay noqdeen kuwo isa soo taraya.
Villa Somalia ayaa waxay wadataa Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor), iyadoona muruq iyo maal badanba ku bixisay, sidii uu ninkaasi ugu guuleysan lahaa jegada Madaxweynaha xigga ee Maamulka Galmudug.
Wakiilada metelaya Siyaasiyiinta Xisbiyada KMG ee dalka ka jira ayaa waxay Magaalada Dhuusamareeb ka wadaan kulamo liddi ku ah dadaalada, ay Shaqaalaha Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ugu cadaadinayan Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug, sidii ay u soo dooran lahaayen musharaxiinta ay gadaal ka taagan tahay dowladda.
Kulamadan ayaa waxaa qayb ka ah kuwo kale oo Odayaasha Dhaqanka ka wadaan Xarunta Maamulka Galmudug ee Magaalada Dhuusamareeb, odayaashu ayaana mooddaa inay ku soo baraarugeen fara-gelinta baahsan, ee wiiqday dhismaha maamulkan.
Siyaasiyiinta iyo Odayaasha Dhaqanka ee ka soo jeeda Gobolada Dhexe ayaa wada abaabul ka dhan ah musharaxa laga soo abaabulay Villa Somalia, loona wado Madaxtooyada Galmudug, ka dib markii ay arkayn sida aanay Dowladda Federaalka dhexdhexaadka uga ahayn doorashada markii ugu horeysay lagu qabanayo Dhuusamareeb.
Inta badan Odayaasha Dhaqanka Galmudug ayaa waxay u muuqdaan kuwo ka soo horjeeda gacan bidixeenta lagu hayo in la dhiso Galmudug la wada leeyahay. Sida la soo warinayo waxay Xildhibaanada ku qancinayan in la badbaadiyo Galmudug.
Odayaasha Dhaqanka Galmudug ayaa mar sii horeysay waxay Madaxda Qaranka ku dhaliileen inaanay ahayn kuwa dam-qabanaya dheg xumida xargaha goysatay, ee ka soo yeeraysa Magaalada Dhuusamareeb.
Nabadoono uu ka mid yahay Nabadoon Maxamed Xaashi ayaa waxay ka diggeen in Galmudug ay marto wadadii saddex iyo toban bilood ka hor martay doorashadii Koonfur Galbeed, taasoo lagu soo doortay madaxweyne ku shaqeeya afkaarta Villa Somalia.
Ahlu Sunada Gobolada Dhexe ka dhisan oo muddooyinkanba ay is hayeen Villa Somalia ayaa toddobadkan bilowday barnaamij ay gacan-saar kula yeelanayso dhinacyada hardanka culus kula jira Dowladda Dhexe, waxaana hadafkeeda lagu sheegay, sidii jaanta dowladda looga reebi lahaa jidka lagu gaarayo Xafiiska Madaxtooyada Galmudug.
Previous articleSiriqda Uu Dhigay Thabit Cabdi Oo Ka Hor Doorashada 2021-ka Isbadel Helaya
Next articleXOG:-Al-Shabaab oo Kaalin ku lahaa magacaabista gudoomiyaha rugta ganacsiga G/Banaadir
Shaac laga qaaday tirada Al-Shabaab iska dishay dagaal dhex-maray iga dhexdooda
Wasiir Goodax Barre oo ku baaqay in shacabka Soomaaliyeed ay Alla Bari la yimaadaan
Maamulka Degamadda Baydhabo oo soo saaray amaro looga hortagayo faafidda Xanuunka COVID-19
Shaqaalaha Dowladda Federalka ah oo la kala fasaxay Coronavirus aawgiis (Doc’s)
Maamulka Gobolka Gedo oo dadweynaha uga digey Goobaha la isugu yimaado
Deegaan ay baneeyeen Al-Shabaab oo dowladda la wareegtey
QAYLO DHAAN KA TIMID MID KA MID AH ISBITAALADA G/ BANAADIR
Dowladda Soomaaliya Oo Soo Rogeysa Go’aano Adag Si Loo Xakameeyo Covid-19
Xisbiga Himilo Qaran oo Ku Guuleystay Dacwaddii ay Ka Gudbiyeen Hey’adda Duulista Soomaaliya